SolBuild, nyowani sisitimu yekugadzira Solus mapakeji | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro Iker Doharty, mutungamiri weSolus, akazivisa chimwe chinhu icho isu tese takanga takamirira uye icho pasina mubvunzo chinopa shanduko nyowani muSolus. Asi mune ino kesi, Iker Doharty akauya kuzotizivisa yako nyowani pasuru uye software yekugadzira system yeSolus, SolBuild.
Iyi sisitimu nyowani inokutendera iwe kuti ugadzire solus mapakeji nekukurumidza uye nyore. Solbuild ichatsiva Evobuild uye iyo inokutendera iwe kuti ugadzire nyowani Solus mapakeji asi zvakare ichakwanisa kugadzira mapasuru ekare, kutsiva maturusi ekare emabasa akadai sekumutsa.
Padanho rezvehunyanzvi, chishandiso chitsva ichi hachimiriri shanduko huru. Mukukosha chishandiso ichi yakavakirwa pane chroot asi inowedzera pamusoro peKufukidzaFS, rukoko runovandudza mhando yemapaketi uye inoderedza huwandu hwezvikanganiso.
Solbuild inogona kuiswa mune kumwe kugovera kupfuura Solus
SolBuild inowanikwa kune vese Solus uye zvese zvakasara zvekugovera, chimwe chinhu chinokutendera iwe kuti ugadzire maSolus mapakeji kwete chete kubva kune kugovera pachako asiwo kubva kune mamwe masisitimu anoshanda seUbuntu Budgie.
Kana isu tine Solus uye isu tichida kuisa chishandiso chitsva, isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvinokonzeresa maturusi ekare kutsiviwa nechishandiso chitsva paunenge uchigadzira mapakeji. Solbuild yatove mune yazvino vhezheni yeSolus. Asi tisati tashandisa chishandiso isu tinofanirwa kuteedzera inotevera mirairo kuita shanduko:
Asi kana tichida gadza chishandiso ichi pane kugovera kunze kwaSolus, iwo maodha akasiyana:
Iyo yekupedzisira inobvumidza chishandiso kuiswa pane kumwe kugovera uye vashandisi vanogona kuvaka mapakeji aSolus vasingatombofaniri kutsamira pane yakatarwa vhezheni yeSolus. Chinhu chinonakidza Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » SolBuild, nyowani sisitimu yekugadzira Solus mapakeji
Ndakamhanya Sudo solbuild init -u Sudo solbuild gadziriso, uye iyo inondiudza ini mune terminal: raira harina kuwanikwa. Izvi zvingave zvakakonzerwa nei? uye ndakaiisa sekureva kwayo, nemirairo yapfuura.